How To Ronga A Trip To Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > How To Ronga A Trip To Europe
How To Ronga A Trip To Europe
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi(Last Updated On: 23/10/2020)
Kana waronga rwendo Europe, zvauri nezvisarudzo zvakawanda saka mikana! zvisingaperi nzvimbo uye zvakaitika, kuti iwe unogona kufamba kwemakore uye zvakadaro uchinzwa sekunge warasikirwa nechinhu chakakosha. Izvi zvinogona kutungamira mukugadzira iyo zvikanganiso zvekufamba yekuzvipira zvakanyanya, uye kurasikirwa duku mashoko kuti pakufamba uye chitima kufamba saka mashiripiti. Tiri pano kuti zvauchafanira kuita uye sei kuronga rwendo Europe, kubvira pakutanga kupedzisa!
muromo 1: Rakatetepa It Down
Usati unogona zvechokwadi Spanish tapas, piazzas muRoma kana matenga edenga muPrague, inokosha zvishoma arun runodiwa! Zvichitaurwa zviri nyore, zvikuru agadzirira muri kana waronga rwendo Europe, zvikuru mikana yako kunakidza uye mupfungwa isina rwendo kuti anorarama zvaunotarisira.
Saka pano Save A Train muromo: sarudza pamusoro shanu, tinofanira-kaksi kuti European ushingi! Zvimwe kunwa ari Hofbrauhaus mu Munich, kana achitora Canal rwokuparidza mu Amsterdam, kana kuongorora David-kubva pamakona zhinji – muna Florence. Zvose zviri, cherechedza avo pasi uye kuronga rwendo kwenyu vakavapoteredza. Nani nokuda nezvitima.
Prague kuenda Berlin Chitima matikiti
Frankfurt kuenda kuMunich Chitima matiketi
muromo 2: Regai udzivise cliches.
Zvino kuti taona kuti unofanira kuronga rwendo Europe, chinotevera kusarudza kwako pamusoro dzakasiyana. In mweya YOLO, ungada kuenda kure akapfumbira njanji uye tsvakai matombo anokosha akavanzwa mukati maguta. Asi hipster mamuri kuti anoda kuenda kunorwisa choruzhinji dzokugara, angada kutora chigaro. On tourist bhazi. Pane chikonzero nei nzvimbo yakaita The yeColosseum, ari Eiffel Tower, uye Charles Bridge are all dzakakurumbira chaizvo kuvashanyi: vari zvikuru! Hausi kunzwa kuti unofanirwa kuwana panzira yakarohwa chete nekuda kwayo. Kana guru zvinokwezva kukufadza, ipapo uende uye kuvaona.
By chete chiratidzo, regai kubata Rinotungamirira sezvo vhangeri. Zvingaita vanoti Louvre iMhedziso_ anofanira-kuita mumwe rwendo kuenda Paris, but maybe you’d have a better day searching for Blek Le Rat pieces on alley walls. Kubvuma sanduko, kana iwe rwendo, Zvinokosha, nguva dzose!
London kuna muFrankfurt Zvitima
London kuenda kuCologne Chitiketi
London kuenda kuBrussels Chitiketi
muromo 3: Travel dates are crucial when you plan a trip to Europe
Travel ari kure mwaka. Popular mwedzi vari July, Nyamavhuvhu, uye September. Vane insanely vakabatikana, tisingatauri chinodhura! Kana uchironga rwendo Europe muna Summer, unenge kugoverana ose chete ruzivo nemamiriyoni uye mamiriyoni dzako shamwari dzepedyo. Accommodation achaparadzwa wakawandirwa panze, kana anodhura uye Zvitima zvichava zvikuru zvizere, vachiona kuti ndivo nzira yakanakisisa kufamba!
muromo 4: Assemble your travel documents is part of plan a journey to Europe
Kana usina pasipoti, ipapo iwe zvakanakisisa kuwana cracking walnut! Zvichatora kwevhiki ina kune vatanhatu kubva panguva chikumbiro kwamuri kugamuchira mumwe. (Zvichienderana chii nyika mamugere Ichokwadi) Expedited mabasa anogona racho rikurumidze, asi mari iwe. Zvakanaka kuti kutarisira tsime ichi pachine pamberi rwendo yako. Vanotova pasipoti? Check yayo ichiri kushanda! Dzimwe nyika angaramba iwe kupinda kana anofa mukati 6 mwedzi kana wasvikapo. EEK!
muromo 5: Kurenda motokari.
achida kurenda motokari kana iwe kuronga rwendo Europe? Iva nechokwadi kuti nechikonzero chitupa chokutyaira. Mamwe makambani Car Rental dzinodawo vafambi kuva dzakawanda chitupa chokutyaira kuwedzera kwavo rezinesi rokutyaira kubva nyika ravakaberekerwa.
Strasbourg kuenda kuParis Chitima matiketi
muromo 6: Regai pamusoro-kurongedza avaiita wako dzokugara vakawandisa.
Sezvambotaurwa pamberi, zviri nyore kuti pamusoro vaite uye edza manikidzira mune zvakawanda. It zvachose kunzwisisika. anosiya Your anokosha anofanira kushandiswa zvakanaka, saka zviri nyore kuedza pamusoro-kurongedza itineraries yenyu kana kuronga rwendo Europe. zvisinei, ichi kunogona kudhura (tisingatauri netesa), sezvo pamusoro-kurongedza nzendo pamwe dzokugara vakawandisa zvishomanana mazuva kunotungamirira nguva yakawanda mumugwagwa, uye zvimwe gasi kana chitima matikiti. In Muzviitiko, inogona kuvhiringidza rwendo, vanoshandura ndokuita akamhanya kuti hotera Check-dzi uye tarisa-outs (nguva dzose chiputiriso uye kubudisa), pandaiona kumbobvira-akashanyira nzvimbo rudzi apfuura chitima mahwindo. kana zvichibvira, Dzora. uchasvika tichengetedze zvokufambisa uye kuwana nguva yakawanda kuongorora nzvimbo dzako.
Brussels kuenda kuRotterdam Chitiketi chezvitima
Antwerp to Rotterdam Chitima matiketi
Berlin kuenda kuRotterdam Chitiketi matiketi
Paris kuenda kuRotterdam Chitima matiketi
muromo 7: Money Exchange
Vafambi kutambisa mari yakawanda kutenga euros kubva kumahombekombe yavo (kana kuipa asi, kubva mari Exchange yemabhuku) asati asvika Europe. Izvi zvinoguma chikuru zvikuru chiri mari! so don’t neglect this subject when you plan a trip to Europe.
zano redu kudzokera pakarepo kuti ATM kana wasvika munyika Europe mumusiye mari uchishandisa kwako ATM kadhi. Hazvina nyore, uye Gengi kuti usvike nokuti kutengeserana ranyura zvechokwadi nani kupfuura chero zvazvingava hatina kunyange yakawanikwa kubva kumba nemabhangi. Dana bhangi yako usati wabva kubvunza pamusoro dzakawanda ATM mutengapwe yechikoro, uyewo achivaudza kuti unenge uchishandisa kadhi rako kunze. Kana musingavaregereri kuvaudza, zvingava pasvika kuti kufunga kuti kubiridzira, uye achaita kuvhara kadhi rako. wo, bvunza kana bhangi wako ane dzakawanda nzvimbo kana kudyidzana pamwe vemunzvimbo Banks Europe.
Frankfurt kuenda kuCologne Chitiketi matiketi
Brussels kuenda kuCologne Chitiketi matiketi
Vienna kuenda kuCologne Chitiketi
Stuttgart kuenda kuCologne Chitiketi matiketi
muromo 8: Chii iwe vanorasikirwa pamusoro ndatsamwa, unowana pamusoro roundabouts
Regai chibayiro nzvimbo yako duku hotera nemari. isu tsigira kupa kupfuura Airbnb wako kana hotera ine vakawanda nechepakati nzvimbo kana waronga rwendo Europe. Budget vafambi, zvikuru sei, vane tsika kusarudza hotera iri kure zvikuru nzvimbo kuti € 5 isingadhuri kupfuura mumwe kuti zvakawanda nechepakati. uchasvika kuponesa nguva uye mari pamusoro chokufambisa (kunyanya kana iwe vanodzamara nokutora nemuchovha).
Zurich kune Basel Chitiketi matiketi
Bern kuenda kuBasel Chitiketi matiketi
Geneva kuenda kuBasel Chitiketi matiketi
muromo 9: Don’t forget to call your phone carrier before you plan a journey to europe
Dana keriya yako kamwe iwe wakakwana kuronga rwendo Europe uye kuwana urongwa Iniadd aunoda kushandisa foni yako, uye ipapo nechokwadi iwe kumisa foni yako kudzivisa netsaona mashoko mhosva (mu pfupi: kudzima cellular Data uye kurambidza uwandu Apps kuti anogona kushandisa cellular mashoko). uye, sezvo hurongwa, kunamatira kusunungura Wi-Fi network kuti kudhanilodha ndichivatuma na, pakuongorora Web uye kushandisa Apps. Europe ine vazhinji WiFi hotspots, saka iwe haungavi hazvichaenderani kwenguva. Nerumwe, kutenga SIM kadhi kuti foni yako paunosvika Europe.
Rimini kuenda kuMilan Chitiketi matiketi
Roma kuenda kuFlorence Matikiti
Turin kuenda kuMilan Chitiketi matiketi
Venice kuenda kuMilan Chitiketi matiketi
muromo 10: Pane An App For That
Eightydays is an awesome travel app that can help you plan a trip to Europe while giving travelers an easy look into the options available when parwendo mhiri Europe.
Users vanotanga achida guta kutanga uye kupedzisa mu (nokuti ikozvino, zvinodikanwa kutanga uye kugumisa rwendo panzvimbo). Zvadaro sarudza kuenda musi, refu kuti rwendo vachava uye vangani dzokugara kubatanidza. Users anogona sarudza kana vachida kutarisa maguta Europe, European Union kana chete Schengen Zone. The Anwendung achabva pave avaiita, kupedza pamwe Airbnb prices muguta rimwe nerimwe, nokuti avo pamusoro bhajeti.
Zviri zvinogoneka kuramba rwokufamba-famba kwevanhu kusarudza kusvikira Anwendung chinogumbura pamusoro ane urongwa kuti anotaridzika zvakanaka. Uye musafunganya pamusoro zvuzvungudza kufamba: The site says izvozvo zvakananga nemasora kure-kure dzendege and early morning departures that can drain travelers on the road.
Kunyange zvazvo zvisiri (asi) hurongwa hwakakwana kuti Réservation rose European rwendo, Eightydays kunogona kubatsira kupa vafambi pfungwa mutengo pfungwa kuti nzendo zvakasiyana nani apo anogona nekuvasuma kuenda varege kare vaiona.
Travlelers can use ari Eightydays Website or the newly launched iOS App to plan their European voyages.
Ryon kuenda kuLondon Nguva dzechitima
Amsterdam kune Antwerp Chitima nguva
Brussels kuenda kuFrankfurt Chitima nguva
Brussels kuenda Mainz Chitiketi matiketi
Ehe saizvozvo, nzira yakanakisisa kufamba anogara nechitima! Kuponesa Train ndiyo nzira yakanakisisa kuti vatenge matikiti dzenyu. Kana uri kuda bhuku rako chitima matikiti tinya Link https://www.saveatrain.com kugamuchira discounts zvikuru.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine batanidzo kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fplan-trip-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / ja kuti / kana / of uye mimwe mitauro.
#bucketlist #HowToGuideEurope europetravel longtrainjourneys chitima mazano famba traveltips